Mitadia trano fisakafoanana misy Pejy Mavo | Fitsangatsanganana tanteraka
Mitadiava trano fisakafoanana misy pejy Yellow
Ny pejy mavo dia mitohy ho loharanom-pahalalana ho an'ny fanjakana hikatsahana fandraisana vahiny sy matihanina amin'ny karazany, manomboka amin'ny mpitsabo nify ka hatrany amin'ny plumber, amin'ny faritra midadasika amin'ny saikinosy. Ary ny filàna mitady trano fisakafoanana mifanaraka amin'ny fotoana rehetra dia manery anao handeha amin'ny Yellow Pages, satria manangona trano fisakafoanana tsara indrindra any Espana izy ary manome ny safidy famandrihana avy amin'ny lampihazo mihitsy.
Arakaraka ny fotoana dia mety mitady a trano fisakafoanana misy menio isan'andro na orinasa misy taratasy misokatra, miovaova arakaraka ny orinasa sy ny andro amin'ny herinandro ny zava-drehetra. Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny fikarohana sy ny trano fisakafoanana hotadiavina isaky ny misy fotoana.
1 Trano fisakafoanana hanidiana sakafo atoandro atoandro
2 Trano fisakafoanana hisakafoanana miaraka amin'ny ankohonanao na ny namanao
Trano fisakafoanana hanidiana sakafo atoandro atoandro
Ny fihinanam-bolan'ny orinasa dia mety manana endrika hafa tanteraka, manomboka amin'ny fananana anjara asa bebe kokoa amin'ny fifanakalozan-kevitra izay anaovan'ny vondron'olona iray hanakatonana fifanarahana, hatramin'ny fihaonan'ireo mpiara-miasa miasa ao amin'ilay orinasa iray ihany. Ny tanjon'ity fivoriana ity dia ny hamorona hatrany a rivo-piainana milamina sy mahazo aina eo amin'ireo misakafo, ka ny fanajana ilaina dia miteraka firesahana mivantana sy mazava.
Amin'io lafiny io dia misy fomba roa samy hafa hanatonana ny fotoana voatondro. Raha fivoriana transactional dia tsara kokoa ny mankany amin'ny trano fisakafoanana taratasy misokatra izay omena ny hafa safidy hisafidy ny takelaka misy azy. Amin'izany dia tsy hahatsiaro terena ianao handray fanapahan-kevitra haingana, zavatra izay hihatra amin'ny sehatry ny asa raha omena anao io fahalalahana io. Etsy ankilany, raha sakafo eo anelanelan'ny ekipa miasa na eo amin'ireo mpiara-miasa izay efa niara-niasa, ny trano fisakafoanana misy menio isan'andro dia safidy mety. Miaraka amin'ny menio misokatra, ny antoko rehetra dia mety ho afa-po amin'izay safidy misy, ary koa manitsy ny vidiny amin'ny karazana paosy rehetra.
Ao amin'ny Lahatahiry pejy mavo afaka mahita trano fisakafoanana isan-karazany ianao, samy misy menio iray amin'ny andro na tsy misy azy, ary koa araka izay azo atao trano fisakafoanana boky ho safidy ao anaty lampihazo. Ny rafitra mihitsy dia manampy amin'ny fanavahana ireo orinasa ireo izay ilana fitehirizana noho ny fahaizany.
Trano fisakafoanana hisakafoanana miaraka amin'ny ankohonanao na ny namanao
Raha ny fisakafoanana lavitra ny trano dia misy a fankalazana ny fianakaviana na amin'ny fihaonan'ny mpinamana dia azo inoana fa amin'ny faran'ny herinandro no atao ny fotoana. Amin'ity tranga ity dia misy trano fisakafoanana manova ny menio amin'ny zoma, asabotsy ary fety, ary koa ny hafa izay mety tsy manana ny safidin'ny menio amin'ny andro. Ao amin'ny lahatahiry Yellow pages ity fampahalalana ity dia toa afaka manavaka ny mety rehetra.
Na izany na tsy izany, rehefa tonga amin'ny fankalazana ny ankohonana, ny tanjona dia ny mankany amin'ny trano fisakafoanana tsara misy menio, ahafahanao manome safidy hisafidianana. Na dia miankina amin'ny isan'ny fisakafoanana koa aza izany.
Na inona na inona toe-javatra mitranga, ny orinasa sy ny andro tsy maintsy handehananao any amin'ny trano fisakafoanana, ao amin'ny lahatahiry an-tserasera Yellow Pages dia azo atao ny mahita trano fisakafoanana hanaovana sakafo isan-karazany.
Toeram-pisakafoanana sy fisotroana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Mitadiava trano fisakafoanana misy pejy Yellow
Ny Balkans: Inona no ho hita amin'ny iray amin'ireo toerana tsy fantatra indrindra eto an-tany